Imicimbi yamanje nezayo - World Tourism Portal
NgoFebhuwari 4 - 20 2022
Idolobha laseBeijing eChina lizoba idolobha elisingatha imidlalo yama-Olimpiki yasebusika ngo-2022, elizowenza idolobha lokuqala ukubamba imidlalo yama-Olimpiki ehlobo nobusika. IBeijing izosingatha imikhosi yokuvula nokuvala kanye nemicimbi yeqhwa yangaphakathi. Imicimbi yokuslayida (i-bobsled, luge, skeleton) kanye nokushushuluza i-alpine izobanjelwa e-Xiaohaituo Mountain esifundeni sase-Yanqing, indawo engaphandle kweBeijing ebangeni elingamakhilomitha angama-80 (North miles) ngasenyakatho nentshonalanga enkabeni yedolobha. Eminye imicimbi yokushushuluza izoba endaweni yaseTaizicheng ski eZhangjiakou, cishe amakhilomitha angama-55 (amamayela ayi-220) ukusuka eBeijing. Le midlalo izoba nge-140 kuya ku-4 kuFebhuwari 20. bese ilandelwa iMidlalo Yobusika iParalympic, 2022 kuya ku-4 Mashi 13.
Ukukhanya kwelanga yilanga kuphela kubonakala eningizimu-ntshonalanga hemisphere
I-united states ukhetho lukamongameli
The Berlin Isikhumulo sezindiza iBrandenburg e Germany kuhlelwe ukuthi ekugcineni ivuleke ngemuva kweminyaka engu-9 yokubambezeleka ngenxa yokungasebenzi kahle kohlelo lokuvikela umlilo
I-2020po World World izovulwa ngaphakathi Dubai.
Umqhudelwano weNdebe Yomhlaba wonke ye-IC2020 T20 uzobanjelwa Australia emadolobheni ayisishiyagalombili.
Julayi 24 - Agasti 9, 2020
Kuzobanjelwa ama-Olimpiki Ehlobo Lango-2020 Tokyo, Japan
Ukwethulwa okuhlelwe kwe-NASA's Mars 2020 ukuthunyelwa ukutadisha ukutholakala kweMars ukulungiselela iminyakazo yabantu ezayo.
Julayi 24 - Agasti 9 2020
Imidlalo ye-XXXII Olympiad, ama-Olimpiki ehlobo lama-2020, izokuba seTokyo, nemicimbi ekhethiwe ebanjelwe eJapan yonke. ITokyo kuzoba wukuphela kwedolobha lase-Eshiya ukuthi ibisingathe ama-Olimpiki ehlobo amabili, njengoba ibisingathe imidlalo ngo-1964. Ngomcimbi wokuvula ngoJulayi 24, izinsuku zomthetho eziyi-16 ezisemthethweni zizophela ngo-Agasti 9. njengoba lo 22. Umkhosi wokuvula wamaParalympics ungo-Agasti 25, kanye noMkhosi wokuvala ngoSepthemba 6. Ngokokuqala ngqa, ukukhuphuka, ikarati, ukukhuphuka ngezinyawo kwezikebhe kanye nokushweza ngezimoto kuzoba semidlalweni yama-Olimpiki, kuyilapho i-baseball ne-softball zibuyela emuva kokuphonswa phansi unyaka ka-2012. Ama-Olimpiki.
Juni 12 - Julayi 12, 2020
I-UEFA namuhla imemezele ukuhlehliswa komqhudelwano weqembu layo lesizwe, i-UEFA EURO 2020, ozodlalwa ngoJuni nangoJulayi kulo nyaka. Impilo yabo bonke ababambe iqhaza kulo mdlalo ihamba phambili, kanye nokugwema ukubeka noma ikuphi ukucindezela okungadingekile ezinsizakalweni zomphakathi zikazwelonke ezibandakanyeka emidlalweni yokuhlunga. Ukuqhubekela phambili kuzosiza yonke imincintiswano yasekhaya, njengamanje esabanjwa ngenxa yesimo esiphuthumayo se-COVID-19, ukuthi siphothulwe. Yonke imincintiswano nemidlalo ye-UEFA (kufaka nobungani) yamakilabhu namaqembu esizwe kwabesilisa nabesifazane ibanjiwe kuze kube kuphinde kwaqashelwa. Umdlalo we-UEFA EURO 2020 wokudlala ama-play-off kanye namaqembu aphesheya kwezilwandle, ohlelelwe ukuphela kukaMashi, manje uzodlalwa efasiteleni lomhlaba wonke ekuqaleni kukaJuni, kuncike ekubuyekezweni kwalesi simo.
Ukhetho lukamongameli waseDominican Republic.
I-Dynastar X3 Courchevel. Unxantathu oyingqayizivele ohlanganisa ukuhamba ngebhayisikile, ukugijima komkhondo nokukhwela okwenziwa ski. Ithagethi: Abaqhudelana abayi-1,000 2019 abangama-amateur ngo-XNUMX!
Inkambo Yamafa Ebusika. Lo mcimbi omusha omnandi uhlanganisa ukushushuluza, umculo kanye nomoya wephathi! Kuhlelo: umuntu o-4 noma isiqalo somjaho omusha we-ski ohlanganisa uchungechunge lwamacala amaningi ngeCombe de la Saulire (moguls, giant slalom, skicross, waterlide…), ukuzijabulisa nekhonsathi.
Ephreli 7 - Meyi 10 2020
IKeukenhof, eNetherlands, iyipaki elihle nemibukiso yezimbali ebabazekayo. Kuhlelelwe ukuthi kuvulelwe isizini se-tulip 7 Eph-10 Meyi 2020, ngokuya ngemikhawulo ehlobene ne-COVID19.
I-3 Vallées Enduro Courchevel. Umbuthano omkhulu kunayo yonke wabasiki be-amateur emhlabeni, kanye nezinselele eziningi ezahlukene kanye nezimanga eziningi ezilindelwe zohlelo lwe-18 lomcimbi!
Meyi 12-16, 2020
I-Eurovision Song Contest 2020 izobanjelwa Rotterdam, ENetherlands.
ILa Folie Douce Courchevel festival. Izinsuku ezi-3 zomculo wasedolobheni nowe-elekthronikhi - I-Courchevel 1850 isithwathwa seqhwa
Isihloko: UBob Sinclar noSynapson. UKUFINYELELA MAHHALA
Ephreli 3-19 2020
Umkhosi weJubili wama-40 Budapest Spring Festival, phakathi kuka 3- Ephreli, ulindele izivakashi ngohlelo olubandakanya iningi lobuciko, nemicimbi yomculo we-classical, opera, i-jazz, umculo womhlaba, umdanso, isekethe yesimanjemanje, yaseshashalazini kanye nezobuciko ezibukwayo. Ngabadlali abahamba phambili baseHungary nezinkanyezi zomhlaba zangempela, lo mkhosi uyisikhathi esikhetheke ngempela, wethula ama-premieres nokuhlangana ngokubambisana nezikhungo zozakwethu. Kuzoba nezindawo eziningi ngo-19 futhi: ngaphezu kweMüpa Budapest kanye neLiszt Academy, i-Pesti Vigadó kanye neVárkert Bazár (Inqaba yaseBaza Bazaar), iBudapest Music Center, iTrafó House of Contemporary Arts, i-Akvárium Klub nezinye izinkundla zemidlalo yaseBudapest, amasiko Izikhungo kanye neminyuziyamu kuzoba yikhaya lemicimbi emangalisayo. Ukuqashelwa futhi ngokubambisana phakathi kweMüpa Budapest, iBudapest festival and Tourism Center neHungary Tourism Agency uchungechunge lomcimbi luyaqhubeka nokwandisa ukunikezwa kwalo ngokubandakanya izikhungo zamadolobha eziholayo.
Umncintiswano wama-French Ski Jumping Championship. Leli yithuba lakho lokuthi ufike futhi uxhase abasubathi abahamba phambili baseFrance kuma-Olimpiki ase-Olimpiki e-Courchevel Le Praz.
UMongameli we-International Olympic Committee (IOC), uThomas Bach kanye noNdunankulu waseJapan, u-Abe Shinzo, babambe ucingo lwengqungquthela namhlanje ekuseni ukudingida isimo esishintsha njalo maqondana ne-COVID-19 kanye neMidlalo yama-Olimpiki iTokyo 2020. ukusabalala okungakaze kubonwe futhi okungalindeleki kwaqubuka kwalesi sikhathi sokudubuka kwemvelo kusibonile isimo emhlabeni wonke siwohloka. Izolo, uMqondisi Jikelele weWorld Health Organisation (WHO), uTedros Adhanom Ghebreyesus, uthe lesi sehla se-COVID-19 siyashesha ”. Kunamacala angaphezu kwe-375,000 manje aqoshwe emhlabeni wonke futhi cishe kuwo wonke amazwe, futhi isibalo sawo sikhula ngehora. Ezimweni zamanje futhi ezincike emniningwaneni onikezwe yi-WHO namuhla, uMongameli we-IOC kanye noNdunankulu waseJapan baphethe ngokuthi imidlalo ye-XXXII Olympiad eTokyo kumele ihlehliselwe kuze kube usuku olungaphezulu kuka-2020 kodwa kungakapheli ihlobo lango-2021, ukuvikela impilo yabasubathi, wonke umuntu obambe iqhaza emihlanganweni yama-Olimpiki kanye nomphakathi wamazwe omhlaba.
I-Kid Contest Courchevel. Izingane zifikelwa yizinselelo futhi nomncintiswano we-Kid Contest ski nomncintiswano weqhwa wabantwana abaneminyaka eyi-10-18.
NgoFebhuwari 26- march 15 2020
Omunye wemikhosi emikhulu yezobuciko emhlabeni, nomcimbi wokuphakanyiswa kwesiko e-Australia.
Februwari 20 2020
Iba ngumvikeli wesibalo! Ngabe ufuna ukukhombisa ku-St Mark's Square ngomaskhi wakho? Abaqhudelanayo bagxambukela esiteji, bedelela omunye nomunye ngemivimbo yezimanga nezimvunulo, imaski kanye nama-wigs, izimpaphe nezindondo lapho beqokwa kabili ngosuku. Futhi kulabo abaphumelele imibukiso ehlelelwe phakathi ngoLwesine nangoMgqibelo (ngoFebhuwari 20- 22nd) owokugcina ngeSonto, 23 uFebhuwari uyaqinisekiswa. Izindaba ezimnandi zangoMsombuluko, ngoFebhuwari 24 zinezimpawu ezimbili ezinikezwe izingane. Ukubamba iqhaza kumahhala, gcwalisa ifomu elitholakala ngoDisemba 2019.
NgoFebhuwari 16-22 2020
I-Rio de Janeiro Carnival izoba ngoFebhuwari 21-26, 2020. Yindawo enkulu kunazo zonke emhlabeni enamapulatifomu, abadansi abavela ezikoleni ezingama-samba ezingaphezu kuka-200, kanye nabagibeli bezimoto ezihamba emigwaqweni ngosuku olulodwa.
Februwari 16 2020
I- "Flight of the Angel" isehlakalo sendabuko esibuyela emuva enkathini yeSerenissima lapho isivakashi esingaziwa saseVenice, sindiza ngentambo sisuka eSan Marco bell tower siya maphakathi nesikwele, sizonikeza udumo ngeDoge, uzobingelelwa ngumbukiso ominyene wesikhathi wezingubo zokugqoka zoMthetho Osetshenzisiwe. Njengesiphetho, ukwamukelwa kweNgelosi neDoge kuzobhebhethekisa umkhathi wesikwele obangelwe yimiphumela ebukekayo ehlale ithokozelwa amanethiwekhi ase-Italiya nawezizwe zonke. Ozophumelela amantombazane ohlelweni luka-2019 lomncintiswano i- “Festa delle Marie” (umncintiswano waseMarie), uzoba yiNgelosi yeCarnival 2020 entsha.
Februwari 15 2020
Umbukiso wesidlo sasemini lapho kuzwakala khona imisindo, amalambu, ukunambitheka kanye nokwenza okuthile kuyizithako ezikhethekile zokupheka ezingafani nezingavamile eziholela izivakashi ngesikhathi nendawo yemilingo. Esigodlweni esihle kakhulu seCa 'Vendramin Calergi enamagumbi ayo amahle e-Renaissance obheke iGrand Canal, uzofaka ubukhulu bomlingo lapho imininingwane yonke iye yanakekelwa - ukunikela ngolwazi lwakho lweCarnival okuthile okungalibaleki. Ingabe usukulungele ukuyiphila ngokugcwele iVenice Carnival? Noma ngubani othanda ukugembula angazama inhlanhla yakhe ngokuphetha kusihlwa eSalotto dei Giochi Classici (igumbi lokugembula) leCasinò di Venezia.
"I-Festa delle Marie" yendabuko izoqala eSan Pietro di Castello ngo-2.30 ntambama, izogudla yonke indawo ngeGaribaldi neRiva degli Schiavoni futhi izofika eSan Marco ngo-4.00: 15 pm, lapho kuzobe kungeniswa khona iMarias eyishumi nambili isixuku sibalindele. Kuphakamisa udumo oluhlonishwa yiVenetian Doge minyaka yonke kumantombazane angama-vene amahle ayishumi nambili kodwa athobekile, ebanikeza ubucwebe obukhulu njengezithembiso zomshado. I- “Festa delle Marie” icaciswa ngezinsuku ezahlukahlukene futhi yithuba lokuncoma izembatho zesikhathi sangaphambi kwendabuko. Lo mcimbi uzokwethulwa ngoMgqibelo mhlaka XNUMX kuFebhuwari, kuthiwe izithandani zamantombazane eziyishumi nambili zikhethwe emasontweni edlule.
NgoFebhuwari 13-16 2020
Umncintiswano womhlaba wePond Hockey. Lo mqhudelwano uzobanjelwa ePlaster Rock, eCanada, kusukela ngomhlaka 13 kuya ku-16 uFebhu 2020. Umqhudelwano ohamba phambili wamachibi e-hockey emhlabeni uzoheha amaqembu angaphezu kwamadoda angama-90 nabesifazane abavela emazweni amahlanu ukuzodlala i-hockey yangaphandle emachibini ale ndawo.
Mashi 9-10 2020
Umkhosi wemibala nguHoli, uyabonakala futhi ugcwele imibala emihle. IHoli libhekwa njengomunye wemikhosi emikhulu eNdiya. Igujwa ngenyanga yePhalgun ngosuku lwenyanga egcwele ngokusho kwekhalenda lamaHindu. Ngokuqala kwentwasahlobo, inyakatho neNdiya ingena esimweni esimibalabala seHoli. Lo mkhosi uphinde usho umgubho ngenxa yokuvunwa okuhle nokuzala komhlaba. Lo mkhosi onemibala futhi ugubha uthando lwaphakade lukaRadha noKrishna. Lomkhosi ugujwa ngesitayela esihle edolobheni laseMathura naseVrindavan. Lawa ngamadolobha amabili abalulekile axhumene neNkosi Krishna. Umkhosi wemibala ufundisa isintu ukudlula ngaphezu kwecaste nenkolelo. Kungumkhosi ukukhohlwa izikhalazo ezindala nokuhlangana nabanye ngemfudumalo enkulu nomoya ophakeme. Lo mkhosi uqala ngokukhanyiswa kwe-bonfire e-Holi eve. Ngosuku olulandelayo, abantu badlala iHoli ngezinhlobo ezahlukene zemibala, ama-abirs kanye nama-gulals. Bavalelisana noShubh Holi ?? ie Happy Holi futhi uthumele izifiso ezifudumele zomkhosi.
FEBRUARY 13 - MARCH 5 2020
Umkhosi Wamazwe Ngamazwe wePrisotechnic Arts Courchevel. Ubusika buyeza! Kulonyaka, ingqikithi yengqungquthela ngumdlalo owaziwa kakhulu we-Game of Thrones.
Lo ngumkhosi ojwayelekile wama-venetians nakubo bonke abavakashi abanentshisekelo kumasiko endawo.
NgeSonto ngo-9 kuFebhuwari ngo-11.00 ekuseni umhlangano wamanzi uCoordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta uzohamba ngomkhumbi eCanal Grande uye esifundeni sabantu baseCannaregio, lapho izethameli zizobukela lezi zikejana ezingafani nalapho izitebele ze-gastronomic ze-AEPE zinayo. izibiliboco zendabuko zomdabu, zizonikeza amakhono akhethekile wokudla venetian. Umculo nesigqi kuzoqhakambisa ipharitha lamanzi.
Ngemuva kokuthi i-Conservative Party ithole ubuningi obukhulu ngonyaka we-2019 i-United Kingdom ukhetho jikelele, Ubulungu be-United Kingdom kwi-European Union buzophela ngokuhambisana ne-Article 50.
Janawari 20 - 2 kuFebhuwari 2020
Umncintiswano we-tennis wase-Australia uzobanjelwa eMelbourne kusuka ngomhlaka 20 Jan kuya ku-2 uFebhu 2020. Ungowokuqala emicimbini yamathenisi amane aseGrand Slam abanjelwa unyaka nonyaka, ngaphambi komhlahlandlela waseFrance, iWimbledon, nase-US Open. Uwumcimbi omkhulu kakhulu ohanjelwe kwiGrand Slam, kunabantu abangaphezu kuka-780,000 abantu abebekhona kuhlelo lwango-2019.
Igloofest 2020 Janawari 16 -Febhuwari 8, 2020
Montreal, QC. Iyiphi indlela engcono yokujabulela ubusika obumnandi kunokuchitha amahora ambalwa ngaphandle ufudumeza ubuchopho futhi ukhulula izicubu? Umenyelwe embusweni we-igloo ukujabulela ukwenza okuhle kusuka kubaculi abahamba phambili be-elektroniki yesehlakalo, i-audi ambisance eyingqayizivele ne-punchy audio-visual, umncintiswano wesudi we-wacky ski, kanye nomoya ojabulisa ugesi okuqinisekisiwe ukukunika ubusuku obushisa busika!
Ama-Olimpiki wentsha yasebusika 9-22 Jan 2020.
Ama-Olimpiki wentsha azoletha abasubathi abavela ezizweni ezingama-73 baye eLausanne, eSwitzerland, kanye nasemiphakathini yangomakhelwane ukuncintisana emidlalweni ebusika eyi-8.
Umkhosi woMlando wamaViking. Shetland, (28 Dec 2019 - 28 Jan 2020)
Uyemukelwa e-Up Helly Aa, okwenzeka eL Lerwick, Shetland, ngoLwesibili olwedlule ngoJanuwari njalo ngonyaka. Usuku lwe-Up Helly Aa lubandakanya uchungechunge lwemashi nokuvakasha, okufika lapho kuhlangana khona ithoshi kanye nokushiswa kwesikebhe. I-Up Helly Aa ngumcimbi womphakathi, onamavolontiya angenakubalwa anikela amahora amaningi ebusika ngalinye ekuhleleni nasekuhleleni umkhosi wonyaka olandelayo.
Ukunambitheka kweTasmania, (28 Dec 2019 - 3 Jan 2020)
Ukunambitheka kweTasmania AustraliaUkudla newayini lomkhosi omkhulu kakhulu. Ngokubukwa okumangazayo kwamanzi, ukusebenza okumangazayo, umculo obukhoma kanye neminikelo yokudlala yasendaweni I-Taste ngumbhiyozo womphakathi wasehlobo ongabhuntshelwa. I-Taste ibuya ngoMgqibelo 28 Disemba 2019 - uLwesihlanu 3 Januwari 2020 kuPrinces Wharf No. 1 Shed. UHobart, omunye unyaka egubha okuhle kakhulu kwabakhiqizi nabakhiqizi baseTasmanian.
ICongress Communication Congress. 27-30 Disemba 2019
Ingqungquthela yonyaka yama-36 yenzeka eLeipzig, eGermany. Le ngqungquthela yezinsuku ezine yobuchwepheshe, umphakathi kanye ne-utopia inikeza izinkulumo, ama-workshops kanye nemicimbi ngobuchwepheshe bolwazi enesimo esibucayi sokudala ubuchwepheshe kanye nemiphumela yentuthuko yezobuchwepheshe emphakathini.
Xhumana ne-Winter Music festival Vancouver, (27 - 28 Dec 2019)
Umkhosi Wokuxhumana ungumkhosi omkhulu womculo wobusika phakathi Canada lokho kwenzeka e-BC Place in Vancouver ngoDisemba 27 & 28, 2019. Umkhosi Wothinta ungumcimbi wosuku lwe-2 ngezigaba ze2 eziqala nge-5pm bese uphela e-12am usuku nosuku. Lo mkhosi uneminyaka yonke enama-19 + imigoqo kanye nesheke lejazi elikhona.
Ukushona kwelanga ilanga, Disemba 26
Ukuzamazama kwelanga okwenzeka njalo ngonyaka kuzobonakala kusuka eSouth Asia. Ukusitheka kwelanga kuzoba yingxenye yeSaros 132
Isibonakude se-CHEOPS, ngo-December 17
Isibonakude sendawo ye-CHEOPS, omsebenzi wayo ukufunda ukwakheka kwamaplanethi ase-extrasolar, kulindeleke ukuthi yethulwe
Imakethe kaKhisimusi Wangeledlule, i-Provins, France, (14 - 15 Dec 2019)
Ama-damoiselles, i-damoiseaux, angena ngaphakathi ebusika futhi ahlanganyele nathi ekushicilelweni kweshumi kweMakethe Yezikhathi ZikaKhisimusi Yama-Provins. Woza uzothola izingcweti zekhombisa ezokuvuselela ulwazi lokuthi cishe ungalukhohlwa kanjani. Iyadlala futhi iyiqiniso, imakethe yangaphambi kukaKhisimusi yama-Provins izothokozisa abancane nabadala. Zifudumele ngokudansa kumculo wesikhathi esiphakathi, thokozela ubuhlakani babashushi bese uthola isimo esiyingqayizivele semilingo semakethe kusihlwa, sikhanyiswa ngamakhulu amakhandlela…
Ukuhamba ku-Snow festival Austria, (12 - 15 Dec 2019)
Sibheke phambili kwi-Open Air Stage yethu, amakamu ethu ezingqungquthela eHinterhag Alm naseSchattberg, ipaki lezimoto eliyimfihlo elingaphansi komhlaba, iCentercourt kanye namaqembu ethu eRaveOnSnow. Izindawo ze-13 nezizathu ze-13 ukugubha iRaveOnSnow futhi uthole i-Saalbach. Lokhu kusethwa okungafani nalokhu kufakwe isitayela, indawo enhle, izintaba ezimbozwe yiqhwa namakhilomitha angaphezu kwama-200 wamakhilomitha amahle.
I-Mevlana festival, (7 - 17 Dec 2019)
Wazalwa ekuqaleni kwekhulu le-13th, uMevlana Celaleddin Rumi wayeyindoda engcwele yase-Anatoli enikeza ithemba nogqozi esintwini, futhi owafa eKonya e1273. UMevlana wayekholelwa ukuthi, ngomculo nomdanso, umuntu angangena esimweni senkolo sokuzijabulisa, ngaleyo ndlela athole uthando lwaphezulu, futhi wakhe inkolo / ifilosofi esekelwe ekubekezelelekeni. Abalandeli bakhe, iMevlevi Order yasungulwa eKonya futhi baziwa nangokuthi iWhirling Dervishes, edume ngemisiko yabo enamandla futhi ejabulisa umdanso ngokusho komkhuba wabo. Njalo ngonyaka ngoDisemba, uMevlana Festival odumile ubanjelwa eMevlana Museum nge-sema njengomzuzu othandwa kakhulu kulo mcimbi. IShema ngumdanso ojikelezayo owenziwe ngezingubo zendabuko ezingokomfanekiso futhi udumile ezweni lonke.